Dadka Mareykanka uma malaynayaan in masiibadii ugu darnayd ay dhammaatay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Mareykanka » Dadka Mareykanka uma malaynayaan in masiibadii ugu darnayd ay dhammaatay
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Education • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Kalsoonida dadka Mareykanka ee ah in tii ugu darnayd ee cudurka faafa ee coronavirus ay dhammaatay ayaa hoos ugu dhacday 23%.
23% dadka Mareykanka ayaa sheegaya in masiibadii ugu darnayd ee COVID-19 ay dhammaatay.
74% dadka Mareykanka ayaa taageersan xirashada maaskaro ee dugsiyada.
75% dadka Mareykanka ah waxay taageeraan xirashada maaskaro meelaha dadweynaha.
Natiijooyinka ra'yiururin qaran oo dhowaan la siidaayay ayaa muujineysa in kalsoonida dadka Mareykanka ee ah in tii ugu darnayd ee cudurka faafa ee coronavirus ay hoos u dhacday ilaa 23% galitaanka dayrta 2021 marka la barbar dhigo gelitaanka xagaaga 2021 (53%) maaddaama ay aad u faafto Delta kala duwanaansho.
23% AMERICANS -KA AYAA YIRI WAXA UGU XUN EE CORONAVIRUS PANDEMIC WAA DHAMAADAY (WAXAA KA DARAN 52% JUNE 2021 IYO 25% FEBRUARY 2021)
Jawaab bixiyaasha ayaa la weydiiyay haddii ay aaminsan in masiibadii ugu darnayd ay dhammaatay. Guud ahaan, 23% ka mid ah jawaab bixiyaasha ayaa ku jawaabay haa, taas oo si aad ah uga hooseysa 53% Juun 2021 iyo 25% Febraayo 2021 iyada oo loo marayo codbixinta qaranka. Jawaabeyaasha da'doodu u dhaxayso 18-29 waxay rumaysan yihiin in tii ugu xumayd ay ku dhammaatay heer sare (27%) marka loo eego jawaabeyaasha da'doodu tahay 60 iyo ka weyn (18%). Ragga ayaa aaminsan in kan ugu xun uu ku dhammaaday heer sare (30%) marka loo eego dumarka (17%). Jawaab -bixiyeyaasha leh heerka kalsoonida ugu sarreysa ee ugu daran ee cudurka faafa ee coronavirus ayaa dhammaaday waa Jamhuuriyiinta (36%), waxaa ku xigay Madax -bannaan (23%) iyo Dimuqraadiyiinta (15%).
72% AMERICAANKA WAXAY KU TALINAYAAN ADOLESCENTS -KU WUXUU LEEYAHAY 12 ilaa 18 IN LAGU TALLAALO
Dadka Mareykanka ah ayaa la weydiiyay haddii ay ku talin lahaayeen dhallinta da'doodu u dhaxayso 12 ilaa 18 inay ku tallaalaan tallaalka FDA oggolaatay. 72% jawaabeyaasha ayaa yiri haa. 90% Dimuqraadiyiintu waxay yiraahdeen haa. 66% Madaxbanaanida/Kuwo kale ayaa yiri haa. 53% dadka Jamhuurigu waxay yiraahdeen haa.
74% AMERICAANKU WAXAY TAAGEERAAN XIRASHADA MASKADAHA DUGSIYADA SI LOO YAreeyo FASAXA CORONAVIRUS
Jawaab bixiyaasha ayaa la weydiiyay haddii ay taageeraan xirashada maaskaro ee dugsiyada si loo yareeyo faafitaanka coronavirus. 74% jawaabeyaasha ayaa yiri haa. 92% dadka Dimuqraadiga ah ayaa yiri haa. 71% Madax -bannaanida/Mid kale ayaa yidhi haa. 50% dadka Jamhuurigu waxay yiraahdeen haa.
75% AMERICAANKU WAXAY TAAGEERAAN XIRASHADA MASKAHA KU JIRA DADKA DADWEYNAHA SI AY U YEELANAYAAN FAAFINTA CORONAVIRUS
Jawaab bixiyaasha ayaa la weydiiyay haddii ay taageeraan xirashada maaskaro meelaha dadweynaha si loo yareeyo faafitaanka coronavirus. 75% jawaabeyaasha ayaa yiri haa. 92% dadka Dimuqraadiga ah ayaa yiri haa. 72% Madax -bannaanida/Mid kale ayaa yidhi haa. 52% dadka Jamhuurigu waxay yiraahdeen haa.